वेश्यालयमा आउँछन् यस्ता अनौठा ग्राहक, जसको माग सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ ! | suryakhabar.com
Home बिचित्र संसार वेश्यालयमा आउँछन् यस्ता अनौठा ग्राहक, जसको माग सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !
वेश्यालयमा आउँछन् यस्ता अनौठा ग्राहक, जसको माग सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !
on: January 06, 2018 In: बिचित्र संसारTags: जसको माग सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !, वेश्यालयमा आउँछन् यस्ता अनौठा ग्राहकNo Comments
एजेन्सी । वेश्यालयमा अनौठाअनौठा ग्राहक आउँछन् र उनीहरुका माग पनि अनौठा नै हुने गरेको पाईएको छ । कस्ता ग्राहक आउँछन् त बेस्यालयमा पढौं अनौठा तथ्य
विश्वको कुनै एक चर्चित वेश्यालयमा एकजना ग्राहक प्रायः आउने गर्दो रहेछ । उसले यौनकर्मी महिलासँग सेक्स गर्नुको साटो महिलालाई एउटा गिलासमा पिसाब फेर्न लगाउँदो रहेछ र त्यसबापत झण्डै २० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दिँदो रहेछ ।
त्यस्तै एक वेश्यालयमा काम गर्ने महिला यौनकर्मीहरुले एकजना यस्तो ग्राहक फेला पारे । उसले एकसाथ ७ जना यौनकर्मी महिलालाई कोठामा राख्दोरहेछ । सातै जनालाई निर्वस्त्र गराएर उनीहरुलाई भित्तातर्फ फर्किएर उभिन लगाउँदो रहेछ । अनि उनीहरुलाई हेर्दै आफुले हस्तमैथुन गर्दोरहेछ । उसले महिलाहरुमाथि हातसम्म पनि लगाउँदो रहेनछ र यसो गरेबापत उसले सातवटै यौनकर्मी महिलाको पूरा शुल्क भुक्तान गर्दोरहेछ ।
एकजना महिला यौनकर्मीका अनुसार एकजना यस्तो ग्राहक उनीसँग आयो जसले सेक्स होइन की नक्कली बन्दुकले लडाइँ गर्ने प्रस्ताव राख्यो । त्यसपछि नक्कली बन्दुक समातेर फायर गर्दै केहीबेर ऊसँग लड्नु पर्दथ्यो । त्यसक्रममा उसले तथानाम गाली पनि गर्दथ्यो ।
एक यौनकर्मीका अनुसार उनी एकपटक एकजना अनौठो ग्राहकको फेला परिन् जसले सेक्स होइन की सँगै बसेर अनौठा खालका आँखिभौँको चित्र बनाउँथ्यो र त्यसक्रममा पागल जस्तै गरी हाँसिरहन्थ्यो ।
एकजना ग्राहक यस्तो पनि रहेछ की उसले यौनकर्मी महिलालाई आफ्नो आमा बन्न आग्रह गर्यो । यौनक्रिडा गर्ने कोठामा एकछिन उसको लागि आमाको अभिनय गरिदिनुपर्ने । अनि ऊ बच्चाजस्तै गरी कोठामा उफ्रिने र रोइकराई गर्ने गर्दथ्यो ।
कतिपय ग्राहक यस्ता अनौठो पनि हुन्छन् की यौनकर्मी महिलाको निर्वस्त्र सरीरमा खानेकुरा राखेर खान पाउनुपर्ने माग गर्दछन् । त्यस्तै एकजना ग्राहकले एक यौनकर्मी महिलाको निर्वस्त्र सरीरभरी चिल्ली सस लगाइदिएको घटना बाहिर आएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा
Tags: जसको माग सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !वेश्यालयमा आउँछन् यस्ता अनौठा ग्राहक
सञ्जय दत्तको आमा बन्न मनिसा कोइरालाले यो के गरिन ?
टिपरको ठक्करबाट स्कुटी चालक युवतीको ज्यान गयो